Covid-19: Hisy miaramila mpitsabo sy mpitsabo mpanampy miisa 50 halefa ao Toamasina
lundi, 01 juin 2020 07:48
Hatao « Antenne Médicale Militaire » ny CEFTAR na ny Centre de formation des techniques agricoles ao Analamalotra - Toamasina. Ho tonga anio alatsinainainy 01 jona ao an-toerana ireo miaramila mpitsabo sy mpitsabo mpanampy miisa 50 mahery izay handrafitra azy, miaraka amin'ny fitaovana ilaina amin'izany mba hanampiana ireo mpitsabo any an-toerana sy ireo toerana izay efa mandray marary.
Nijery ny CEFTAR hatao « Antenne Médicale Militaire » ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny Minisitry ny Mponina ny Alahady 31 May.
Nomarihin’ny minisitra fa efa nigadona ao Toamasina ny marain’ny Alahadin’ny Pantekôty ireo miaramila miisa 250 hanampy ireo mpitandro filaminana amin'ny fampiharana sy fanajana ireo fepetra rehetra mifandray amin'ny fahamehana ara-pahasalamana.
"Tsy maintsy mipetraka eto Toamasina ny paik'ady mitombona amin'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana ary manampy ny vahoaka amin'izany ny Tafika" hoy ny jeneraly Rakotonirina Richard, raha nanome toromarika ireo miaramila ato an-toerana.